Rating: SKU: 330784-47-9. Categories: Nwoke Jiri, Mmekọahụ Mmebi Hormones
Avanafil uzuzu na-arụ ọrụ site na ịbawanye ọbara na-abanye na amụ n'oge mkpali mmekọahụ. Ọbara a na-erugharị n'ọbara nwere ike ime ka ọ rụọ ọrụ. Uru nke avanafil bụ na ọ nwere mmalite ngwa ngwa ngwa ngwa ma e jiri ya tụnyere mmekọahụ na-eme ka homonụ nwee mmekọahụ. Ọ na-etinye obi gị dum ngwa ngwa, na-eru oke ịta ahụhụ n'ihe dị ka nkeji 30-45.
Usoro Molecular: C23H26ClN7O3
Molekụla arọ: 483.95
Ka anyị leba anya na nsonaazụ nke otu izu 12 izu nke atọ nke ikpe. Emechara ụmụ nwoke 646 ka ha were 50, 100, ma ọ bụ 200 mg nke Avanafil ntụ ntụ nkeji 30 tupu ịmalite ịmalite inwe mmekọahụ. Enweghị mgbochi na nri ma ọ bụ mmanya. N'ime mgbalị 300 metụtara mmekọahụ n'oge ọmụmụ ahụ, 64% na 71% nwere ihe ịga nke ọma n'etiti ụmụ nwoke ndị were Raw Avanafil uzuzu ma e jiri ya tụnyere 27% n'etiti ụmụ nwoke ndị were placebo. Ozi ọma ndị ọzọ: 59% na 83% nke mgbalị 80 na-enwe mmekọahụ mere ihe karịrị 6 awa mgbe ọ nụsịrị ure Raw Avanafil na-aga nke ọma ma e jiri ya tụnyere naanị 25% mgbalị na-aga nke ọma na ụmụ nwoke ndị were placebo. N'ime ụfọdụ ụmụ nwoke, Avanafil uzuzu rụrụ ọrụ dị ka obere oge dị ka nkeji 15. (Goldstein 2012)
• Priapism: Mgbatị na-egbu mgbu> awa 6 na oge a kọọrọ (adịkarịghị). Gwa ndị ọrịa ka ha chọọ nlekọta ahụike ozugbo ma ọ bụrụ na nrụgide adịgide> 4 awa. Jiri nlezianya na ndị ọrịa nwere ọnọdụ nke nwere ike ibute ha na priapism (ọrịa sickle cell anaemia, multiple myeloma, leukemia).